दिनभर मोटरसाइकलमा रेकी, रातभर ट्याक्सी र भ्यान लिएरै चोरी, चोरेरै काठमाडौँमा जग्गा र गाडी! :: BIZMANDU
दिनभर मोटरसाइकलमा रेकी, रातभर ट्याक्सी र भ्यान लिएरै चोरी, चोरेरै काठमाडौँमा जग्गा र गाडी!
प्रकाशित मिति: Mar 15, 2019 3:59 PM
काठमाडौं। गत फागुन २७ गते प्रहरीको एउटा टोली मध्य बानेश्वरमा पुग्यो। प्रहरीको साथमा चोरीमा समातिएका दुई युवक सँगै थिए। बा १ ज ११९२ नम्बरको ट्याक्सी भरि चोरी भएका सामान राखिएको थियो।
'स्थानीयले सहयोग गरिरहेका थिएनन्। कोही पनि बोल्न पक्षमा थिएनन्। ती आमाले आएर त्यति भनेकाले ठूलोमात्रामा चोरीका सामान बरामद गर्न सकियो,' उनले भने। बरामद गरेको सामानको मूल्य ७० लाख बराबरको भएको प्रहरीको दाबी छ।
विगत चार वर्षदेखि कोठामा भाडामा लिएर चोरीको सामान स्टोर गर्ने गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी अशोक सिंहले बताए। 'उनीहरूले चोरीको सामान आफूहरू ठुलो व्यापारी भएको भन्दै १० देखि २० प्रतिशत कम गरेर बेच्ने गरेको देखियो,' सिंहले भने।
प्रहरीले पसल नजिकै रहेको सीसी क्यामरामा ट्याक्सी देखेपछि समात्न सफल भएको डिएसपी प्रसाईले बताए। ‘हामीले ट्याक्सीलाई फलो गर्‍यौं। दश वटा ट्याक्सीलाई निगरानी गरेपछि पत्ता लगाएका हौं,' उनले भने।